FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AMERIKANA GASONA AMERIKANA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika amerikana gasona amerikana
Sary natolotry ny American Blue Gascon Hound Association
Alika marani-tsaina tokoa ny American Blue Gascon Hound. Tena natokana ho an'ny fianakaviany izy io, manao alika mpiara-miasa tsara. Miaina anaty trano tsara izy io ary milalao mpiambina tsara ho an'ny fianakaviany sy ny tranony. Matetika izy ireo dia tsara indrindra amin'ny ankizy lehibe, fa afaka manao tsara amin'ny kely kokoa koa. Ny sasany mety ho somary masiaka alika raha tsy tompony ny tompony mpitondra matanjaka mampita ny hafatra amin'ny alika izay fitondrantena tsy ekena. Ny tompony dia tokony ho mafy orina ity alika ity, matoky tena ary tsy miovaova mpitarika fonosana mba avoahy ny tsara indrindra ao aminy. Mifandraisa tsara , tsara kokoa raha mbola tanora, mba hialana amin'izy ireo tsy ho voatokana amin'ny olon-tsy fantatra. Ny American Blue Gascon Hound dia a mpihaza mafana fo ary tsy tokony atokisana amin'ireo biby fiompy tsy kaninina. Ity karazana ity dia mailo, mitandrina ary afaka miasa amin'ny faritra sarotra amin'ny toetr'andro ratsy. Aza avela hiala amin'ny tadiny amin'ny faritra tsy azo antoka ity fambolena ity, satria mety hanala izy ireo aorian'ny fofona mahaliana. Manana toetra voajanahary mahery amin'ny biby biby izy ireo. Raccoons hipetraha ny fanjakana sy ny faritany rehetra any amin'ny tanibe Etazonia sy Kanada, ary efa an-jato taona no nanenjehan'ny mpihaza. Isan-taona dia fitsapana amin'ny alina an-jatony no mahazo alalana. Ny fitsapana tsirairay dia maharitra adiny telo ary misy alika telo ka hatramin'ny efatra. Nomena isa arakaraka ny fahafahan'ny alika mahita, mamaky ary hazo rakotra . Very ny isa amin'ny lalao haingon-kazo hafa ankoatry ny rakikira. Ny alika tsirairay dia manana 'feo' tokana izay fantatry ny tompony matetika. Tsy manana hodi-kazo maneno mahazatra ny American Blue Gascon Hound, fa kosa kiaka mafy izay toa feo miantsoantso fohy. Ny American Blue Gascon Hounds dia liana liana ary manana fironana hanaraka ny orony. Raha manangona fofona izy ireo dia mety hirenireny ary tsy henony akory ianao miantso azy ireo hiverina, na tsy miraharaha ny fihainoana azy ireo, satria ho be loatra izy ireo mitady ny critter any amin'ny farany ilany. Mitandrema rehefa avelanao hiala izy ireo fa any amin'ny toerana azo antoka ianao. Ny American Blue Gascon Hound dia manana maso tsara, izay mamela azy hiasa tsara amin'ny alina. Ny American Blue Gascon Hound dia miavaka amin'ireo fitsapana ireo. Izy ireo koa dia azo ampiasaina hanarahana amboahaolo na cougar mihitsy aza. Ny American Blue Gascon Hound dia manana endrika tsy misy tahotra sy mpiady amin'ny fihazana. Ity karazana ity dia mety hidina an-tsokosoko na slobber.
Hahavony: 25 - 30 santimetatra (63 - 76 cm)
Lanja: 50 - 90 pounds (22 - 41 kg)
Ny American Blue Gascon Hound dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny. Aza avela hiala amin'ny fitarihany ity karazany ity raha tsy amin'ny toerana azo antoka sy azo antoka. Coonhounds dia manana fironana hanaraka ny orony, ary raha mahatratra fofona manitra izy ireo dia mety hirenireny mandritra ny ora maro aorian'izany.
Ilaina ny fanaovana fanatanjahan-tena mahery isan'andro, izay ahitana fanatanjahan-tena lava mandeha an-tongotra isan'andro . Coonhounds izay tsy manana fanatanjahan-tena ampy ara-tsaina sy ara-batana dia mety hanjary ho mahery vaika ary manimba mihitsy aza. Ity alika be fanahiana sy mavitrika ity dia nompiana ho an'ny fanatanjahan-tena mafy. Teraka mpihaza voajanahary ny Coonhounds, noho izany dia manana fironana handositra sy mihaza izy ireo raha tsy voatazona fefy tsara rehefa manao fanatanjahan-tena samirery. Tsy manana fahatsapana an-dàlana mihitsy izy ireo, ka tsy maintsy hitazona azy ireo amin'ny toerana azo antoka.
Tokony ho 11-12 taona eo ho eo.
Ny fikosehana tsindraindray dia vita. Mba hihazonana ny sofina ho madio sy tsy misy aretina, dia ilaina ny mijery tsy tapaka.
Ny American Blue Gascon Hound dia kinova lehibe kokoa an'ny Bluetick Coonhound miaraka amin'ny fahaizany miasa am-boalohany hita taratra amin'ny andalana. Ny American Blue Gascon Hound Association dia nilaza fa ny alika dia sarobidy amin'ny fahaizany manitra, ny tanjaka, ny hasiana, ny hakingany, ny fikirizany, ny faniriany ary ny feo bobo na feo lava be eo amin'ny fikatsahana lalao hazo / bay.
ABGHA = Fikambanan'ny Blue Gascon Hound
doberman pincher sy chihuahua mifangaro
Jack russell afangaro amin'ny pitbull
laboratoara boston terrier mampifangaro alika kely
fifangaroana labozia pointer alemana shorthair
mpiandry ondry australianina sy tertera mix